“Haddii dawladaadu ay sharci ka tahay guud ahaan Somaliland, maxaad u siin weyday 30% gargaarka aad heshay” Michael Rubin sarkaal hore oo Pentagonka Maraykanka | Berberanews.com
Home WARARKA “Haddii dawladaadu ay sharci ka tahay guud ahaan Somaliland, maxaad u siin...
“Haddii dawladaadu ay sharci ka tahay guud ahaan Somaliland, maxaad u siin weyday 30% gargaarka aad heshay” Michael Rubin sarkaal hore oo Pentagonka Maraykanka
“Haddii dawladaadu ay sharci ka tahay guud ahaan Somaliland, maxaad u siin weyday 30% gargaarka aad heshay” Michael Rubin sarkaal hore oo Pentagonka USA
Washingtone-(Berberanews)-Michael Rubin, oo ah aqoonyahan Maraykan ah oo madax ka ah machadka American Enterprise Institutute, kana tirsanaan jiray ciidammada saraakiishii hore ee Xarunta Gaashaandhigga Pentagonka, ayaa warbixin dheer oo uu ku qoray Washingtonepost uu Madaxweynaha Somalia kula garnaqsaday Farmaajo, isagoo soo bandhigay 10 su’aalood oo loo baahanyahay inuu jawaab u helo Madaxweynuhu.
Michael Rubin wuxuu hoosta ka xariiqay dhaqaalaha badan ee caalamku siiyo Somalia, halka uu ku baxo iyo musuqmaasuqa ragaadiyay dawladda Federaalka Somalia.
Michael Rubin waxaa kale, oo uu ka hadlay sababta Somalia ugu hadaaqdo Somaliland, iyadoo aan awoodin inay ka taliso caasimadda Somalia ee Muqdisho.
Michael Rubin oo warbixintiisa dheer ku qoray Washington Examiner waxaa uu kaga sheekeeyay maraaxilkii kala duwanaa ee Somalia soo martay, waxaannu ka soo qaadanay 10ka su’aalood ee uu kula garnaqsanayo Madaxweynaha Somalia.
Waa maxay sababta Somalia ay u hesho gargaar caalami ah oo dheeraad ah?
Maraykanku wuxuu kordhiyay lacagaha ay Somaalia ugu deeqday in ka badan $ 900 Milyan, ka dib sanado badan oo ay siinaysay $ 500 milyan. Dabcan, Somaalia waxay ka heshaa wax ka badan ta bulshada caalamka. Miyuu jiraa min qiyaas kaasoo ay Somalidu ku horumarisay oo loo eego lacagta ay heshay? Amniga? Xuduudaha dhulka? Dhaqaalaha? Waxbarashada?
Maxay tahay sababta mushaharka Muqdisho loo kordhiyay?
Mid ka mid ah arrimaha walaaca Somalia waxa weeye mushaarkeeda xad-dhaafka ah waa mid aad iyo aad u sarreeya , laakiin adeegyadii iyo tayada waxtarkoodu aad uga hooseeyo kuwa Somaliland, gobolka goonida u goostay ee waqooyiga Somalia , kasoo u shaqeeya si madaxbanaani ah. Haddii maamulka Somaliland ay shaqo fiican ku qaban karaan dhaqaale yar, maxaa u diiday Somalia inay sidaas samayso?
3. Waa maxay qorshaha wax lagaga qabanayo musuqmaasuqa?
Musuqmaasuqa iyo boobka khayraadka ma aha oo kaliya aas-aaska burburkii Somalia, laakiin sidoo abaaraha sii soconaya iyo masiibada macaluush. Hase yeeshee, Soomaaliya meesha ugu hooseysa kaga jirtay xisaabtanka cad ee qiyaasta musuq-maasuqyada muddo ka badan toban sano. Maxay tahay sababta Mareykanka ama ururrada caalamiga ah ay lacag u siiyaan waddanka si joogto ah uga kharash badan marka loo eego Venezuela, Afqaanistan, ama Waqooyiga Kuuriya? Maxay xukuumaddaadu ku dhaqantay ficil si loo yareeyo musuqmaasuqa? Imisa wasiir ama caawiye ayaad u eriday musuqmaasuq?
4. Waamaxay sababta farmaajo u safar badanyahay? Farmaajo wuxu ku jira dhaleecayn xagga xafiiskiisa h, oo ah qaabka uu markasta ugu safraayo caalamka, halkii uu ka joogi lahaa Muqdisho si uu u maamulo caasimadda iyo dib u soo kabashada dalka. Hase yeeshee, laba sano ka dib markii uu ku guuleystey doorashada, Farmajo wuxuu hadda u safray dalka dibeddiisa, isagoo ku riyaaqaya duulimaadyo raaxo iyo waxaa ku xeeran xagga dalkiisu u socdo. Muxuu Farmaajo ugu baahan yahay inuu u safro dibadda? Miyaanay ahayn shaqada Wasaaradda Arrimaha Debedda? Inkasta oo Farmaajo uu dibedda ku sugan yahay, yaa maamula dadaallada maalinlaha ah ee lagu dayactirayo Somalia?
5. Somalia ma badbaadaysaa AMISOM ka dib? AMISOM waxaa loola jeeday maaha kaliya in ay la dagaalamayso al-Shabaab, laakiin in ay siiso Soomaaliya si ay dib u dhisto ciidankeeda. Laakiin ciidanka ayaa ka cabanaya in mushaarkooda la lumiyay (eeg su’aasha 3), askartuna aysan rabin inay u dagaallamaan lacag la’aan. Sidaa awgeed, maadaama ciidamada AMISOM ay bilaabaan inay gurigooda ku noqdaan, Somalia waxaa laga tegaya aiyadoon lahayn ciidan shaqeeya. Yaa lagu soo oogay dacwad ah in uu khiyaameeyay mushaaraadka askarta? Ma waxaad ka filaneysaa Somalia in ay ka hortagto al-Shabaab haddii ciidanku aanu rabin inuu la dagaallamo?
6. Haddii aad rabto taageerada Mareykanka, maxaad China uga kiraysatay dalkaaga?Waxaad joogtaa Washington oo aad ka dalbaneysa gargaar dheeraad ah, laakiin dawladaadu waxay xuquuq kaluumeysi siisay Shiinaha. Ma aaminsantahay in Shiinuhu ka danaysanayo Soomaaliya? Haddii aysan ahayn, maxay yihiin danihiisu? In kasta oo budhcad-badeednimadu ay tahay arrin adag, ma kula tahay Ogolaanshaha Shiinaha ee biyaha Somalia inay kor u qaadayso shaqo abuurka kalluumaysatada Soomaalida mis way wiiqaysaa? Haddii kalluumeysatada Soomaaliyeed aysan awoodin in ay noolaadaan, ma waxaad halis u tahay burcad-badeednimada sii socota ee Geeska Afrika? Halkeebay ku baxday lacagta heshiiska Shiinaha?
7. Maxaad Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda u weydiisatay inay dhexdhexaadiso khilaafka Kenya kadibna u sugi weyday go’aanka?Xukuumadda Soomaaliya ayaa waydiisatay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda inay dhexdhexaadiso khilaafka xudduudaha badda ee Kenya, ka dibna waxay sii wadi doontaa sii-deyn qarsoodi ah oo ku saabsan xuquuqda baadhitaanka gaaska ee aagga lagu muransan yahay. Miyaadan hoos u dhigin sharciyeynta geedi socodka markaad bilowdo oo aad iska indho tirto? caqli ma tahay inaad la hayste u tahay marka ay Soomaaliya ku tiirsan tahay ciidamada Kenya inta badan tobaneeyo sano ee la soo dhaafay? 8. Sababtee ayey Somaliya wax u faro-gelinaysaa khilaafka Israel iyo Falastiin?Toddobaadyadii la soo dhaafey, Soomaaliya ayaa shaqadii ka eryey Cabdullaahi Dool, oo ahaa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, kaas oo sheegay in cadaawada Israa’iil aanay ku jirin danta Soomaaliya. sidoo kale, Miyaad sharaxi kartaa dub u yeeshistii Faduma Abdullahi Mohamud, Safiirka Soomaaliya u fadhiya Switzerland, ka dib markii ay ka aamustay go’aankii UN ee lagu dhaleeceeyay Israa’iil? Ma jiraan warar sheegaya in dib u yeedhistu timi ka dib markii uu telefoon dhexmaray Seantor Ilhaan Cumar, D-Minn., Iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Ahmed Isse Cawed? Miyaanay Omar iyo Cawad ahayn isku jilib isku midka ah,miyaanay hore ug wada shaqeynin arrimaha siyaasadda?
9.Ma waxaad aaminsantahay in Turkigu yahay xoog xasilinaya Soomaaliya?Dhinaca kale, Turkigu wuxuu si weyn ugu maal-galiyay Soomaaliya, waxaadna u isticmaaleysaa Turkiga in ay dhexdhexaadiso khilaafka Soomaaliya ee ka jira Somaliland. Dhanka kale, Turkiga ayaa xarun millatari ku dhisay magaalada Muqdisho, ciidamaddeeduna waxay SADAT u muuqataa in ay siineyso tababar iyo caawimo kooxaha xagjirka ah ee Islaamiga ah gudaha Soomaaliya. Xaaladahaas oo kale, iyo gaar ahaan warar sheegaya xidhiidhka Turkiga ee al-Shabaab, Turkigu dhab ahaan miyuu ka shaqaynayaa xasilita Somalia? Iyadoo la tixgelinayo musuqmaasuqa Somalia iyo Turkiga labadaba, miyaad dooneysaa inaad soo bandhigto shuruudaha heshiiska oo si cad ula xisaabtamaya dhammaan maalgelinta ka dhalatay maamulka madaarka iyo heshiisyada saldhigga?
10. Waa maxay sababta ay hadafkaaga u tahay inaad dub ula midowdaan Somaliland?Somaliland waxay xaqiiqdii madaxbannaanayd tan iyo 1991kii, waanay hanaqaaday halka Soomaaliya inteeda kale ay ku soo jirtay fowdo. Maxaad u filanaysaa Somaliland (taas oo, intii u dhexeysay 1988 illaa 1991-kii, ahayd xaalad xasuuq laga soo fulinayay Muqdisho) inay weligeed dub ula midowdo Somalia inteeda kale, marka aqalkii looga talinayay Somalia aanu gacantaada ku jirin? sidee xildhibanno Muqdisho joogaa “u matalaan” Somaliland markii aan lagu soo dooran Somaliland oo aanay cagta dhigin ? Miyaanay ahayn inaad dhinac iska dhigta Somaliland illaa iyo inta Soomaaliya ay wax ka qabanayso arrimaha aasaasiga ah ee dhimista musuqmaasuqa iyo dib u soo celinta amniga? Haddii aad sheeganayso in dawladaadu ay sharci ka tahay guud ahaan Somaliland, maxaad u siin weyday 30% gargaarka aad heshay, si toos ah dadka reer Somaliland? Ma jeclaan lahayd in si wanaagsan looga guulaysto qalbiyada iyo maskaxda muhiimka u ah haddii dib-u-heshiisiintu tahay mid shaqeynaysa?
Gargaar dibadeed maaha wax macno leh,sida taariikhda Soomaaliya ay muujinayso, marka loo soo bixiyo taxaddar la’aan, waxay waxyeello ka weyn u geysan kartaa wanaagga. Raysal Wasaare Khayrre waa inuu inuu ku laabtaa Muqdisho -farriin fudud: Xisaabta loogu talagalay gargaarka hore ayaa laguu siiyay oo muuji awooda lagu horumarinayo waxkasta oo Somalia khusueeya, ka hor inta aan la bixin wax lacag oo dheeraad ah.
Warbixintan oo Ingiriisi ah oo dhammaystiran ka akhriso linkigan
Previous articleSomaliland: Statement Regarding IGAD’s Establishment Of a Task Force On The Red Sea & The Gulf Of Aden
Next articleDawlada Jabuuti oo war cusub ka soo saartay halkay ku danbeeyeen Shirkado Ganacasade Axmed Geelle shaaciyey in Qoyska Madaxtooyada Jabuuti kala wareegay & Baanka BCIMR